Ungakhetha kanjani ama-binoculars: amathiphu namasu angcono kakhulu | I-Network Meteorology
IsiJalimane Portillo | 09/06/2022 10:00 | Ukwahlukanisa
Imakethe ihlinzeka ngekhathalogi ebanzi yama-binoculars lapho singaqhathanisa futhi sikhethe ama-binoculars angcono kakhulu ezinhlelo zokusebenza ezihlukahlukene ezihlanganisa ukubuka izinyoni, ukugibela izikebhe, ukukhempa, ukuzingela, ezemidlalo, amakhonsathi, ukubhekwa, isayensi yezinkanyezi, nokuningi. Ukuze ufunde indlela yokukhetha ama-binoculars kungase kube inkimbinkimbi ngandlela-thile. Kungakhathaliseki ukuthi yiziphi izidingo zomsebenzisi, kukhona ama-binoculars anomklamo ofanele nokusebenza ngenjongo yawo. Ukukhetha ama-binoculars afaneleka kakhulu, kufanele sicabangele okuguquguqukayo okuhlukahlukene njengendawo ezungezile, izintandokazi ezithile, imisebenzi, njll.
Ngenxa yalesi sizathu, sizonikezela lesi sihloko ukukutshela ukuthi ungakhetha kanjani ama-binoculars, izici zawo nokubaluleka kwawo.
1 Ungakhetha kanjani ama-binoculars
1.2 Ububanzi belensi yenhloso
1.3 phuma mfundi
1.4 Inkambu yokubuka (FOV)
1.5 Ilensi/ibanga leso
1.6 Ubude bokugxila obuncane
1.9 bheka umahluko phakathi
Ukukhanya nokucaca kwezithombe ezibonwa ngama-binoculars, ikakhulukazi, kunqunywa izici ezihlukahlukene. Ukukhuliswa, ukwelashwa kwelensi kanye nobubanzi benhloso ngezinye zezinto ezithinta ukusebenza kwezibonakude.
Nokho, umbandela oyisisekelo wama-binoculars yikhwalithi yawo yokubona. I-Celestron iwuphawu lwenani lemali olunikeza okokubona kwekhwalithi ephezulu ngenxa yezingilazi ezikhethwe ngokucophelela nokwelashwa kwamehlo, izinqubo zokukhiqiza ezinembayo kanye nokulawulwa kwekhwalithi okubanzi.
Ukukhulisa izinga lokukhuliswa kwento ebhekiwe. Isibonelo, kuma-binoculars angu-7x42, inombolo 7 isho "ukukhulisa insimbi." Ama-binoculars angu-7x akhulisa izinto izikhathi ezingu-7 uma kuqhathaniswa neso lomuntu. Ukukhulisa kuthinta ukukhanya kwesithombe, ngakho-ke ukukhuliswa okuphansi kwama-binoculars, isithombe sizokhanya. Njengomthetho ojwayelekile, ukwanda kokukhuliswa kubangela insimu yokubuka encishisiwe.
Ububanzi belensi yenhloso
Ilensi yenhloso yama-binoculars itholakala ngaphambili futhi inobubanzi obukhulu kakhulu. I-diameter (ngamamilimitha) yenye yamalensi iyinombolo yesibili yesici se-binoculars. Esimweni esinjalo, 7x42 binoculars inomgomo wobubanzi obungu-42mm. Ububanzi belensi yenhloso bunquma ikhono le-binoculars lokuqoqa ukukhanya, ngakho-ke uma ubukhulu bebubanzi buba bukhulu, isithombe siyakhanya futhi sithambile. Lokhu kuwusizo ikakhulukazi ezimweni eziphansi zokukhanya nasebusuku.
Lokhu kungase kukuholele ekucabangeni ukuthi ubukhulu be-diameter, ngcono ithuluzi, kodwa empeleni, ububanzi be-lens kanye nezinye imingcele ezifana nomfundi wokuphuma kanye nokusetshenziswa kwama-binoculars kufanele kucatshangelwe ekunqumeni imingcele efanelekile kakhulu.
"Umfundi ophumayo" angachazwa njengobubanzi, ngamamilimitha, bomugqa wokukhanya ophuma engxenyeni yamehlo yesibonakude. Uma umfundi ophumayo emkhulu, isithombe esiwumphumela siyakhanya. Ukuba nomfundi ophumayo omkhudlwana kwenza kube lula ukubuka ebusuku nasekukhanyeni okuphansi. Ekusetshenzisweni kwezinkanyezi, umfundi ophumayo wezibonakude kufanele alingane nezinga umfundi wesibukeli anwebeka ngalo njengoba ejwayela ubumnyama.
Ukuze ubale umfundi ophumayo, hlukanisa ububanzi benhloso ngesici sokukhulisa. Isibonelo, ama-binoculars angu-7x42 anomfundi ophumayo ongu-6mm.
Inkambu yokubuka (FOV)
Indawo ebonakala ngezibonakude ibizwa ngokuthi inkundla yokubuka. Inkambu yokubuka ivamise ukuvezwa ngaphandle kwebhanokhuli futhi ikalwa ngamadigri. Inkundla yokubuka ewumugqa iyindawo ebonakalayo kumayadi angu-1000 (amamitha angu-915), ikalwa ngezinyawo. Inkambu enkulu yokubuka ihumusha endaweni enkulu ebonwa ngamabonakude.
Inkambu yokubuka ihlobene nokukhuliswa, ukuphakama kokuphakama, umkhakha wokubuka ube mncane. Ngaphezu kwalokho, inkambu enkulu yokubuka iphumela ekuncipheni kwebanga leso/iso. Umkhakha obanzi wokubuka uwusizo ezimweni lapho izinto zihamba khona. Ukuze ubale inkambu yomugqa wokubuka, phinda i-engeli yenkundla yokubuka ngo-52,5. Isibonelo, ama-binoculars anenkambu yokubuka engu-8o amboza inkambu ewumugqa wamafidi angu-420 (amamitha angu-126).
Lo mqondo ubhekisela ebangeni (ngamamilimitha) lapho ama-binoculars angahlukaniswa neso kuyilapho egcina indawo yokubuka enethezekile. Abagqoka izibuko bazohlomula ngamabanga amade.
Ubude bokugxila obuncane
Yibanga eliphakathi kwama-binoculars kanye nento eseduze engagxilwa ngenkathi kugcinwa isithombe esihle.
Ikhono le-binocular lokuthwebula nokudlulisa ukukhanya okwanele ukuze kukhiqizwe isithombe esigqamile nesicacile linquma ukukhanya kwayo. Ukukhanya kwama-binoculars nakho kuthuthukisa umehluko phakathi kwemibala esithombeni esibukiwe.
I-Relative Brightness Index (RBI), Twilight Index kanye Ne-Relative Light Efficiency (RLE) kukhona izinkomba ezivame ukusetshenziswa embonini ye-binocular, kodwa ezimweni eziningi ayiqondwa kahle noma imiqondo engasho lutho.
Ukukhanya kuwumqondo okufanele ucatshangelwe lapho ukhetha ama-binoculars, kodwa akuyona into ebaluleke kakhulu.
Ukukhanya kuncike kumapharamitha amaningana, okuhlanganisa ububanzi benhloso, ukukhuliswa, uhlobo nekhwalithi yengilazi esetshenzisiwe, ukucutshungulwa kwe-optics, kanye nohlobo lweprism esetshenzisiwe. Ngokuvamile, ububanzi obukhulu, amandla aphansi noma aphakathi, ama-lens ahlanganiswe ngokugcwele afaneleka kakhulu.
Amaprism kuma-binoculars asetshenziselwa ukuguqula izithombe futhi eze ngemiklamo emibili: uphahla nesigxobo. Ama-prism ophahla alula futhi aminyene ngokuklama. Ama-prism abizwa nge-BK7 (borosilicate) kanye ne-BaK-4 (ingilazi ye-barium). Zombili zishibhile futhi zisebenza kahle kakhulu. Ingilazi yomklami we-BaK-4 inokuminyana okuphezulu (inkomba ye-refractive) ecishe iqede ukukhanya kwangaphakathi okunhlanhlathayo, okuholela ezithombeni ezinencazelo ephezulu.
Umehluko yizinga lapho izinto ezimbili ezikhanyayo nezimnyama zihluka ngalo kungemuva lesithombe. Ukugqama okuphezulu kusiza ukubona izinto ezifiphele kanye nokubona imininingwane emihle. Ukugqama kuthintwa ukulungiswa.
Ukuphakama kokulungiswa, kuyanda ukugqama. Ikhwalithi ephezulu yokucubungula i-optical ihlinzeka ngezithombe zokugqama okuphezulu. Ezinye izici ezithinta umehluko ukungqubuzana, ukuphazamiseka komoya, kanye nekhwalithi yezinhloso, ama-prism, nezinto zamehlo.
Ngithemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nendlela yokukhetha ama-binoculars nokuthi yini okufanele uyicabangele.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Ungakhetha kanjani ama-binoculars
Izinguquko ezinkulu zesimo sezulu emlandweni womhlaba